 » taharo niobium
Product name: Tsorakazo Niobium
Marika Nb1 Nb2 NbZr1 C-103 Cb752
ianareo 0.002 0.005 0.02 0.7~ 1.3 0.2
ton 0.10 0.25 0.10 0.5 0.5
SY 0.005 0.02 0.005 – –
W 0.03 0.05 0.03 0.5 9.0~ 11.0
de 0.005 0.01 0.005 – –
Nb Sisa sisa tavela Sisa sisa tavela Sisa sisa tavela Sisa sisa tavela Sisa sisa tavela
Diaméter na halavan'ny sisiny Fiviliana azo avela ny savaivony na ny halavan'ny sisiny halavan'ny Voapaika hatramin'ny halavany
Fiviliana azo ekena
Sora-by tehina extrusion Rolling bar Mitoto volo 200~ 1500 +5
3.0~ 4.5 ± 0,05 — ± 0,05 — 200~ 1500
>4.5~ 6.5 ± 0.10 — ± 0.10 — 200~ 1500
>6.5~ 10.0 ± 0.15 — ± 0.15 — 200~ 1500
>10.0~ 16.0 ± 0.20 — ± 0.20 — 200~ 2000 +20
>16.0~ 18.0 ± 1.0 — — ± 0.30 200~ 2000
>18.0~ 25.0 ± 1.50 ± 1.0 — ± 0.40 200~ 2000
>25.0~ 40.0 ± 2.0 ± 1.5 — ± 0,50 200~ 2000
>40.0~ 50.0 ± 2.50 ± 2.0 — ± 0.60 200~ 2000
>50.0~ 65.0 ± 3.00 ± 2.0 — ± 0.80 200~ 2000
>65.0~ 150 ± 4.00 ± 3.0 — ± 1.00 200~ 1000
Marika Ny savaivony na ny lafiny / mm Faharetana amin'ny sintona
σb / MPa Herin'ny vokatra
σs / MPa Elongation
ny / %
Nb1 / NB2 3~ 18 ≥125 F85 F25
fampiasana: Ny tsorakazo sy ny tariby niobium sy ny tariby niobium dia be mpampiasa amin'ny zavatra simika, elektronika, sahan'habakabaka sy aerospace noho ny teboka miempo ambony, fanoherana ny harafesina ary fananana miasa mangatsiaka tsara.
Ny tsorakazo niobium sy ny niobium dia ampiasaina ho fitaovana ara-drafitra ho an'ny maotera aero sy ny balafomanga, toy ny singa anatiny sy akora fitondra ho an'ny reactors, ary amin'ny fanaovana fitaovana mahatohitra ny toetran'ny nitrika manimba, hydrochloric na asidra solifara.
Isan-karazany ny faritra tsy mahazaka harafesina ambanin'ny. Ny fampidirana ny zirconium amin'ny niobium dia manatsara ny fanoherana ny okididia sy ny tanjaky ny fitaovana, ary tariby niobium sy niobium-zirconium dia ampiasaina amin'ny habetsahana betsaka amin'ny famokarana jiro sodium avo lenta sy
Lead anode capacitor electrolytic.
Kalitaon'ny endrika ivelany: Ny velaran'ny bara fiasa mangatsiaka sy tsy misy rindrina dia tsy hisy triatra, vala, porosity, fampidirana metaly sy tsy metaly, hoditra mavesatra, lubricants residual, oksida sy loto hafa.
Ny velaran'ny bara amin'ny fanjakana miasa mafana dia tsy hisy triatra, vala, hoditra mavesatra sy kilema hafa misy fiatraikany amin'ny fanodinana manaraka. Ny velaran'ny bar dia avela hanana lalan-kely miaraka amin'ny halalin'ny fandeferana tsy mihoatra ny antsasaky ny savaivony. ConcavePits, scuffs, rangotra, Ny tadin-tsolika miforona mandritra ny fanitsiana sy ny marika kely azo avela dia avela.
Précédent: Lasibatra Niobium
Manaraka: Fantsona Niobium
taharo niobium (5)